Wasiirka Caafimaadka Turkiya oo gurmad ku tagay Muqdisho – Kasmo Newspaper
Updated - October 16, 2017 10:34 am GMT
London (Kasmo), Wasiirka Caafimaadka Turkiya, Ahmed Demircan, ayaa maanta oo Isniin ah, 16 Oktoober 2017, ku sugan Muqdisho, astaan muujinaysa sida Turkigu u garab taagaanyahay mas’uuliinta Soomaaliya, qarixii Sabtida ee 276da qofood ku dhinteen ka dib.
Maalintii shalay Turkiya waxay Xamar u dirtay diyaarad Militari oo dawooyin sidda iyo koox 33 dhakhaatiirta gurmadka degdegga ah oo ay ku jiraan 2 qalliinka ah, 2 jajabka ah iyo 2 ku takhasusay qalliinka nooca “Plastic” ee jirka la isugu geeyo.
Turkiya waxaa kale oo ay habaysay khad caafimaad oo dalkeeda loogu duulinayo dadka qaba dhaawacyada halista ah ee aan gudaha Soomaaliya wax looga qaban Karin. Dad lagu qiyaasay 300 oo qofood ayaa dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen qaraxaas, waxaana jira dad wali la la’yahay oo an tiradooda la ogayn.
Qoraal ka soo baxay Wasaaradda caafimaadka Ankara, warbaahinta dalkuna faafisay waxaa lagu dheegay in isla maanta la gudbiyay 50 qofood oo dhaawacyo halis ah ka soo gaareen qaraxii Sabtida.
Wasiir Demircan inta uu ku guda jiro booqashadiisa Xamar wuxuu la kulmi doonaa Madaxweyne Farmaajo, oo shalay ku dhawaaqay 3 maalmood oo baroordiiq qaran ah, isaga oo u gaarsiin doona tacsi uu uga sido dhiggiisa Erdogan.
Turkiya waa saaxiibka ugu weyn ee dalalka Soomaaliya gacanta siiya wakhtigaan ay ku jiro soo kabashada, iyo dalkii u horreeyay oo u soo gurmada masiibadii qaraxa ka dib, waxaana hoos loo dhigay calankii Turkiga ee Safaaradda Muqdisho.